knowledge – ဘ၀ ဒသန
အဆီတဝင်းဝင်း နဲ့ မဲနေတဲ့မျက်နှာကို ခဏလေး နဲ့ ချက်ချင်း ပုံစံပြောင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ မျက်နှာအဆီပြန်တတ်တဲ့ အသားအရေများက ပူနေတဲ့အချိန်ကာလတွေဆို သိပ်ကို စိတ်ညစ်ကြရပါတယ်။ အရေပြားက သဘာဝအဆီတွေကို ပုံမှန်အချိန်ထက် ပိုထုတ်တဲ့အပြင် အပြင်မှာ အရမ်းပူနေလို့ ချွေးကလည်း ထွက်၊ အရေပြားဆဲလ်အသေတွေက စုပုံနေ ချွေးပေါက်တွေက ကျယ်နေပြီးတော့ အညစ် အကြေးတွေပိတ်မိနဲ့ ဝက်ခြံပေါက်လိုက် ပျောက်လိုက်နဲ့ သံသရာက လုံးလည်ချာလည် လိုက်နေတော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မျက်နှာအဆီတဝင်းဝင်း ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ် သက်ပြီးတော့ ခဏလေးနဲ့ ရှင်းလင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို အခုလိုပဲ Read more
စနေသားသမီးများအတွက် တစ်နှစ်စာ ကံကြမ္မာဟောကိန်း ဒီနှစ်မှာ စနေသားသမီးတွေ safe ဖြစ်တဲ့နှစ်ပါတယ်။ မလုံခြုံတဲ့ ဘဝ၊ မတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားတွေကနေ စတင်ပြီး အနယ်ထိုင်လာပါပြီ။ စတင်ပြီးအခြေကျလာပါပြီ။ ပရမ်းပတာ ဖြစ်နေတဲ့ စနေသားသမီးများ ဒီနှစ်မှာ တော့ စတင် အိန္ဒြေရလာပြီးလို့ပြော ရပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာတွေငြိမ်စပြုလာပြီဖြစ်တဲ့ နှစ်အပိုင်းအခြားဖြစ် တာမို့ ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲ…ဘာတွေကြံစည်ဆုံးဖြတ်ရမလဲ…အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လိုပုံဖော်မလဲဆိုတာမျိုး တွေကို စတင်စဉ်းစားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်စီမံကိန်းတွေအတွက် စတင်ဆောင်ရွက်ပါ။ လုပ်ဆောင်ပါ။ ရိုးရိုးတွေးပါ။ တစိုက်မတ်မတ်ဆောင်ရွက်ပါ။ ဒါဆို ဒီနှစ်ဟာ မြူတွေဆိုင်းနေတဲ့အချိန် နေမင်းထွန်းလင်းလိုက်သလို ၊ မိုးရွာပြီးစ ကောင်းကင်ယံလို Read more
မွန်ပြည်နယ်မှာ လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၁၀၀ ပျက်စီးမှုနှင့် နောက်၂၄နာရီအတွင် မွန်ပြည်နယ်မှာ လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၁၀၀ ပျက်စီးမှုနှင့် နောက်၂၄နာရီအတွင်း ရွာမည့်မိုး မွန်ပြည်နယ်၊ပေါင်မြို့နယ် အလှပ်ကျေးရွာ လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်၊လူနေအိမ်ခြေ (၁၀၀)ခန့်ထိခိုက်ပျက်စီး မေလ ၂၄ ယနေ့ မေလ ၂၄ ရက် နေ့လယ်ခန့်က မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် အလှပ်ကျေးရွာကို လေဆင်နှာမောင်း ဝင်မွှေသွားတာ အိမ်ခြေ(၁၀၀)လောက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ(၅)လုံးဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးသွားတယ်လို့ ကနဦးသတင်းရပါတယ်။ Photo – ယနေ့ အလှပ်ကျေးရွာ လေဆင်နှာမောင်းထိပြီး Read more
မြန်မာတွေလက်တစ်ကမ်းက ရှောက်ရွက်ရဲ့ အစွမ် မြန်မာလဆန်းရက်မှာ ရှောက်ရွက်ကိုစားထားရင် အဲဒီတစ်လလုံးလေမဖြတ်တော့ဘူးလို့ ရှေးရိုးစကားရှိပါတယ်။ ရှောက်ရွက်ကိုကြက်သွန်ဖြူ၊ ငြုပ်ကောင်းတို့နဲ့ ဟင်းခါးချက်ပြီးအမြဲတမ်းသောက်ပေးရင် လေငန်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလား မဟုတ်ပါဘူး၊ကမ္ဘာပေါ်မှာအဖြစ်များပြီး၊အပျောက်နည်းတဲ့ ကင်ဆာရောဂါကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်၊ ရှောက်ရွက်ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မကြီးထွားနိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို ၃/၄ ကြိမ်စားသုံးပေးရုံနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ရှောက်ရွက်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့ Astsiri အဆီဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီး သူ့ အနံ့က ဦးနှောက်ကိုစိတ်ဖိစီးမှု လျော့ချတဲ့ ဟော်မှုန်းတစ်မျိုးထုတ်လုပ်အောင် နှိုးဆွပေးတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနေရသူများအထူးစားသုံးသင့်ပါတယ်။ ရှောက်ရွက်မှာ ပိုးသတ်ဆေးလိုမျိုး ပိုးမွှားတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတဲ့အတွက် ဖျားနာနေရင်ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေရင် ရှောက်ရွက်ကို Read more
လူအနည်းငယ်သာသိကြတဲ့ ပျားရည်ကိုအသုံးပြုဖို့ နည်းလမ်း ၁၄ခု
လူအနည်းငယ်သာသိကြတဲ့ ပျားရည်ကိုအသုံးပြုဖို့ နည်းလမ်း ၁၄ခု လူအများစုက ကွက်ကီးတွေကိတ်တွေကို နူးညံ့စေဖို့နှင့် သကြားမသုံးချင်တဲ့အခါ အစားအစာတွေကို ချိုမြစေဖို့ ပျားရည်ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာ သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျားရည်မှာ antibiotic ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိပြီး အနာကျက်စေ တာကြောင့် အရသာရှိတာထက် အများကြီး အသုံးဝင်ပါသေးတယ်။ ရှေးခေတ်အီဂျစ်မှာ ပျားရည်ကို ဆေးဝါးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြတာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပျားရည်ကို တခြား နည်းလမ်းနဲ့ ဘယ်လိုအသုံးချလို့ရမလဲဆိုတာကို ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပ ဗဟုသုတအနေနဲ့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ပျားရည်က အရက်နာကျတာကို Read more
အိုလာရင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမလဲ?
အိုလာရင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမလဲ? ကျွန်တော်တို့အားလုံး အိုရမဲ့လူတွေပါ… အိုလာရင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမလဲ? ကျွန်တော်တို့အားလုံး အိုရမဲ့လူတွေကြီးကြီးပါ။ ခုမအိုသေးပေမဲ့ ဖတ်ထားရင် ကိုယ့်အတွက် ကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်ချိန်ရသလို၊ ကိုယ့် မိဘတွေအတွက် ဆန်းစစ်ဆင်ခြင်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အကြံလည်းပေးလို့ရတာပေါ့၊ အိုလာရင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ၊ ဘာသာရေး ရှုထောင့်ကနေမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ ဘဝရှုထောင့်ကနေ ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်…. ။ ၁။ အိုဖေါ် ( လင် မယား အို ) လင်အိုမယားအို မေတ္တာကောင်းမွန်နေဖို့လိုပါတယ်။ အရင်တုန်းက ချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ အသက်ကြီးလာတော့ Read more
ဝက်ခြံကြောင့်ကျန်နေတဲ့ အမာရွတ်တွေကိုပျောက်ကင်းစေမယ့်ထိရောက်မယ့်နည်းလမ်းကောင်းများ ဝက်ခြံကြောင့်ကျန်နေတဲ့ အမာရွတ်တွေကိုပျောက်ကင်းစေမယ့်ထိရောက်မယ့်နည်းလမ်းကောင်းများ ဝက်ခြံဆိုတာ အစားအသောက် အနေအထိုင်မမှန်နေတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ထွက်လာတတ်တာ သဘာဝပါပဲ။ ဝက်ခြံတွေက ပေါက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်း အမာရွတ်တွေကျန်နေခဲ့တတ်တာကြောင့် ဒီလိုမျိုး အမာရွတ်တွေကိုပျောက်ကင်းစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုလည်း သိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ သခြားသီး သခွားသီးက အသားအရေအတွက် အတွင်းပိုင်းကနေရော အပြင်ပိုင်းကနေပါ အများကြီးကူညီထောက် ပံ့ပေးပါတယ်။ သခွားသီးက စားမယ်ဆိုရင်လည်း ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေဓာတ်ပြည့်စေပြီး အသားအရေတွေကိုလည်း ကြည် လင်ပြီးလှပလာစေပါတယ်။ အသားအရေပေါ်မှာတင်ပြီ ပေါင်းတင်တာမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း အသားအရေကိုကြည်လင်ပြီး အမာရွတ်တွေကိုလည်း လျော့နည်းလာအောင် လုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ် ရှားစောင်းလက်ပတ်ကလည်း Read more
ချစ်သူကောင်လေး သင့်ကို ရိုးမသွားပဲ အမြဲသတိရနေစေချင်ရင် ဒါတွေလုပ်ပါ
ချစ်သူကောင်လေး သင့်ကို ရိုးမသွားပဲ အမြဲသတိရနေစေချင်ရင် ဒါတွေလုပ်ပါ လူတစ်ယောက် အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို လွမ်းနေ၊သ တိရနေတာမျိုးကို မလိုချင်တဲ့သူမရှိပါဘူး။တစ်ချို့ ကိစ္စတွေဟာ ဒီတိုင်း သမရိုးကျနည်းအတိုင်း သွားတာထက် နည်း နည်းလေးဉာဏ် များပေး ဖို့ လိုပါတယ်..။သူ့ကိုယ့်အကြောင်း မစဉ်း စားပဲ မနေနိုင်ပဲ လွမ်းနေအောင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းတွေရှိပါတယ်နော်.. (၁) ငြင်းပါ… လူတော်တော်များများက ခက်ခဲတာကိုမှ ပိုကြိုက်ပါတယ်။လူ တိုင်း ကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူနဲ့အတူရှိချင်ကြသူတွေပါ။တွေ့မယ် ချိန်း လို က်တိုင်း ငေါက်ခနဲ Read more
အရပ်ရှည်ရှည်ကောင်မလေးဖြစ်ချင်၍ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာSee more…
အရပ်ရှည်ရှည်ကောင်မလေးဖြစ်ချင်၍ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာSee more… မိန်းကလေးများအနေနှင့် အရပ်ပုတာလေးက ပိုပြီးချစ်ဖို့ကောင်းသည်ဟု ဆိုကြသော်လည်း လူသားတို့ဧ။် သဘာဝအရ ကိုယ့်တွင်မရှိသော အရာလေးကိုမှ တမ်းတမ်းတတ လိုချင်မက်မောကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့ရှိ အသက် ၂၅နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးသည် မူလအရပ်မှာ ၁မီတာနှင့် ၄၈ သာအမြင့်ရှိ၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမရပဲ အရပ်ရှည်ရှည်ဖြစ်ချင် သောကြောင့် ခွဲစိတ်ပြီး ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။သို့သော် ခွဲစိတ်ရန် ငွေကြေးမ လုံလောက်၍ မိန်းကလေးသည် တစ်နေ့တည်း အလုပ် သုံးခု လေးခု ကိုမမောမပန်းလုပ်ခဲ့ပြီး Read more
ဆိုင်ကယ်စီးသူတိုင်းသတိထားသင့်တဲ့အချက် အင်းဆက် အကောင်လေးတွေဆိုတာက အမှောင်ကို ကြိုက်ကြတာများပါတယ်။ ဂျောင်ဂျိုဂျောင်ကြားတွေထဲ ဝင်နေတတ်ပြီးတချိူ့အကောင်တွေဆိုရင်လူ့အသက်ကိုတောင် အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံက Wak Sarepလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားကTiktok မှာvideoတစ်ခုကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။ ၄၈နာရီအတွင်းမှာပဲ ကြည့်ရှူသူပေါင်း၃၀၀၀၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Video ထဲမှာတော့ကင်းခြေများတစ်ကောင်ကဦးထုပ်ထဲမှာဝင်နေတာကို မြင်ရမှာပါ။ သူဟာ Perak မြို့ကို သွားနေတဲ့အချိန်ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ထဲနဲ့ နားရွက်ကြားထဲမှာ တစ်ခုခု ထောက်နေတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ မိနစ် ၄၀ လောက်အကြာမှာတော့ စိတ်မရှည်တော့ပဲ ဦးထုပ်ကို ချွတ်ပြီး အတွင်းထဲကို သေချာရှာကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လို ရှာရင်းကနေ ကင်းခြေများဟာ ဦးထုပ်ထဲမှာ ဝင်အိပ်နေတာကို Read more